ထိုင်းဘက်မှ ရေထိန်းနံရံ တည်ဆောက်ရန် ဆောင်ရွက်နေမှုအား မြန်မာဘက်မှ တားဆီး၍ ထိုင်းဘက်မှ ရပ်ဆ?? - Yangon Media Group
ထိုင်းဘက်မှ ရေထိန်းနံရံ တည်ဆောက်ရန် ဆောင်ရွက်နေမှုအား မြန်မာဘက်မှ တားဆီး၍ ထိုင်းဘက်မှ ရပ်ဆ??
ဝေါလေ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၄
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် ကရင် ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့နယ် ဝေါလေမြို့ နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ဝေါလေရွာတို့ ကို စည်းခြားနေသော ဂေါ်လီ ချောင်းအတွင်း၌ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ ရေထိန်းနံရံတည်ဆောက်နေမှုကို မြန်မာဘက်မှ တားဆီးခဲ့သည့်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ ရပ်ဆိုင်း ပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဝေါလေမြို့သည် မြဝတီမြို့နှင့် မိုင် (၅ဝ)ခန့်ကွာဝေးပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ဝေါလေရွာနှင့် ဂေါ်လီချောင်း လေးတစ်ချောင်းသာ စည်းခြားလျက်ရှိပြီး ယင်းဂေါ်လီချောင်းမှာ မြန်မာနှင့်ထိုင်း ရေမိုင် ၂၄ မိုင် ဆက်စပ်လျက်ရှိကာ ချောင်းအကျယ်မှာ ၁၈ ပေခန့်ရှိသည်။ ယခုလ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက်က ယင်းဂေါ်လီချောင်းအား ရေထိန်းနံရံများ ပြုလုပ်ရန် ထိုင်းဘက်ခြမ်း မှ ဆောင်ရွက်နေသည့်အတွက် မြန်မာဘက်ခြမ်း ဝေါလေမြို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဇော်မိုးက သွား ရောက်တားဆီးခဲ့သော်လည်း နား ထောင်ခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နေသဖြင့် ထိုင်းတာဝန်ရှိသူများထံ ဦးဇော်မိုးက ဆက်လက်အကြောင်းကြားလိုက်သည့် အတွက် ဇန်နဝါရီ ၁၄ရက် နံနက် ၁ဝနာရီတွင် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ ‘ဖုတ်ဖ’မြို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mr Nathan Ko နှင့်အဖွဲ့နှင့် ထိုင်းတပ်မတော်မှ တပ်ရင်းမှူးတစ်ဦးတို့ ဂေါ်လီချောင်း ရေထိန်းနံရံပြုလုပ် ရန်တိုင်းတာနေသည့် နေရာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဝေါလေမြို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်လာရောက် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့သည်။
”သူတို့ဘက်က ရေထိန်းနံရံ တွေလုပ်တော့ ကိုယ့်ဘက်ခြမ်းမှာ ကမ်းပါးတွေရေတိုက်စားပြီး ပြိုတာ ပေါ့။ ဒါကြောင့် ရေထိမ်းနံရံတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင် ထိုင်း-မြန်မာနယ် ခြားကော်မတီအစည်းအဝေးမှာ တင်ပြဆွေးနွေးကြပြီး နှစ်ဖက်သဘောထားတူညီမှုကိုရယူရတယ်။ နှစ်ဖက်သဘောထားတူ ညီပြီးမှသာ ဆောင်ရွက်ရတာကို သူတို့ဘက်က နှစ်ဖက်သဘော တူညီမှုမှမယူဘဲ ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်က တား ဆီးတာပါ။ အခုတော့ သူတို့ဘက်က တာဝန်ရှိသူတွေလာပြီး ပြောတဲ့ အတွက် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်လို့ ညှိနှိုင်းမှုအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဝေါလေမြို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဇော်မိုးကပြောကြားသည်။ ဝေါလေမြို့မှ တာဝန်ရှိသူများ နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ တာဝန်ရှိသူများ ညှိနှိုင်းမှုအရ ထိုင်းဘက်မှ ရေ ထိန်းနံရံပြုလုပ်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်နေမှုကို ရပ်ဆိုင်းထားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ကတိပြုခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီ ၁၄ရက် မွန်းတည့် ၁၂နာရီတွင် ရပ်ဆိုင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
မူဆယ် ၁ဝ၅ မိုင် ကုန်စစ်ကွင်းအတွင်း ရပ်ထားသော ကုန်ကားတစ်စီးအောက်၌ ထောင်ထားသော မိုင်းတစ်လံ??
စပါးအတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် ဂိုးအများဆုံး သွင်းနိုင်သူ ဟယ်ရီကိန်းဖြစ်လာ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကိုသုံးစွဲခြင်းနှင့် တင်ဒါလုပ်ငန်းမျ?
ကျောင်းသားကို ယာဉ်တိုက် ခံရမှုဘေးမှ ကာကွယ်ရင်း အသက်စွန့်သွားသူ ဆရာမ ဒေါ်သန်းသန်းဝေကို ဂုဏ်ြ?
စပိန်အတွက် အမြဲဂုဏ်ယူစွာ ကစားခဲ့ကြောင်း ပီကေး ဖွင့်ဟ
ကမ္ဘောဒီးယား ဝန်ကြီးချုပ်၏သား စစ်ဘက် ထိပ်တန်းရာထူး ရယူ